बिच सडकमा चालकको कुटाई खाने लक्ष्मी के भन्छिन् ! (हेर्नुहोस भिडियो) – PanchKhal Online
Home/भिडियो/बिच सडकमा चालकको कुटाई खाने लक्ष्मी के भन्छिन् ! (हेर्नुहोस भिडियो)
यतिबेला सामाजिक संजालमा चालकबाट महिला यात्रु कुटिएको भिडियो भाईरल बनेको छ । बास्तबिकता के हो भन्ने कुरा प्रहरीको अनुसन्धान पछि थाहा होला तर भिडियोमा देखिए अनुसार धेरैले चालकलाई दोषी देखेका छन । हेरौ पिडित महिला के भन्छिन ।
भिडियो हेर्नुहोस !- (फर नेपाल टिभी)
७ बर्षिय बालिकाको अचम्मको कला, “मुखबाट नै बजाउछिन सबै बाजा” ! [भिडियो]